» नाजुक अर्थतन्त्रः व्यापार घाटा कुल सरकारी खर्चभन्दा डेढ गुणा ठूलो !
नाजुक अर्थतन्त्रः व्यापार घाटा कुल सरकारी खर्चभन्दा डेढ गुणा ठूलो !
२०७९ असार ८, बुधबार ११:३३
व्यापार घाटाको यो आकार जेठ मसान्तसम्मको बजेट खर्चभन्दा ५२ प्रतिशत बढी हो । जेठ मसान्तसम्म कुल १० खर्ब ३५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ११ महिनामा नेपालमा साढे १७ खर्ब बढीको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार एघार महिनाको अवधिमा रु १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालले रु १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड बराबरको आयात गरेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा २७.५ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको छ ।